Ababhali abangaphezu kwe-100 babelana ngolwazi lwabo kwiNcwadi yeShishini eliBhetele Martech Zone
NgoMvulo, nge-23 kaJanuwari, 2017 Douglas Karr
Ungathini xa ungathetha nabantu abali-100 beshishini kwaye wabelane nabo ngeyona ngcebiso yabo inkulu? Le yayiyingcinga engemva kwe- Incwadi eNgcono yoShishino, Iprojekthi eyenziwe nguTyler kunye neqela e Inkqubo yokuZipapasha.
Isampulu yeNcwadi yeShishini eliNgcono
Zonke iZizathu zakho zokuZikhohlisa: Amatyala amaBini aBonisa ukuba awudingi naliphi na amava, Imali okanye uNcedo lokuQalisa iShishini eliPhumeleleyo - iphe. 9
Ufuna kuphela ukuba ulunge kanye-enye yawona maGcisa aBalaseleyo kuwo onke amaXesha adalwe ngaphezulu kwamaQhezu ama-50,000 aPapashiweyo
Isizathu Sokuba 'Wenze Into Oyithandayo Nemali Iyakulandela' lelinye lawona macebiso acaphukisayo oya kuze ulufumane (nento omele ukuyenza endaweni yoko) - iphe. 17
Fumanisa Isizathu esingama-99% sokungaphumeleli kwakho kwangaphambili (uyakothuswa yindlela ekulula ngayo) emva koko uyisebenzise le
Iqhinga elilula lokuqinisekisa ukuba awusoze ukhubazeke ngenxa yoloyiko kunye nokugqithisa kwakhona - iphe. 32
Amanyathelo ama-7 endiwalandele ukwenza i $ 500 kwi-Suzuki yam yokuqala ngaphezulu kweminyaka eli-10 eyadlulayo (Ngokukhawuleza ukuya namhlanje) Ndisawathatha la manyathelo ngalo lonke ixesha ndifuna ukuphumeza into enkulu) - iphe. 45
Ukuphoswa ngamathuba ngenxa yokunqongophala kwamava? Isifundo endisifundileyo kuMmeli oPhezulu weNtengiso yeeNaliti kweli lizwe (Ngubani onokuthi ngokuQhelekileyo afake inaliti) Undincede ndakhe Amashishini amaninzi aphumeleleyo kwiNiches ezahlukeneyo - Ukusuka kwiFilimu nakumabonakude ukuya ekubonaneni - iphe. 57
Umnini-ndawo yokutyela waseFransi usebenza iintsuku ezi-9 ngokuthe tye, ukuGubungela iiShifti ezongezelelekileyo + ixesha elongezelelekileyo nge- $ 1800 Ngelixa undwendwe lwakhe, uMcebisi ngezeziMali, esenza isixa esifanayo kwimizuzu engama-35. Fumanisa ukuba yintoni eyenza umahluko (Icebo: ayisiSidanga sakhe) - iphe. 60
Okulungileyo, Okubi kunye nokuGwenxa kokuSebenzisa i-Intanethi kwiShishini- Funda ngokuBona ukuLunga, ukuJamelana nokubi, Hlala kude ne-Ugly kwaye ukonwabele yonke iMizuzu yoTyelelo lwakho loShishino - iphe. 69 \_
Ulibale into oyifundileyo kwiSikolo seShishini- ayisiyiyo indlela yokuSebenza kweNkqubo yokuThengisa! Funda ukuba ungayisebenzisa njani indlela ye-OSCAR yokuvala nayiphi na into ngaphandle kokuvakala njengoMthengisi oMcaphukisayo (Ngokwenyani, uya kuba nakho ukuthengisa ii-crutches kwi-Olimpiki ye-Olimpiki) - iphe. 77
I-nugget yam yakhethwa njengesahluko, Yeka ukumamela wonke umntu, apho ndibelana ngesona sifundo silungileyo kwikhondo endalifundayo ngendlela enzima… ngunyaka oyintlekele kwiarhente yethu. Ndithathe izigqibo ezothusayo. Ndifunde ntoni ukubuyisela inkampani kumkhondo? Ngendenze ntoni ngokwahlukileyo? Ndiyathemba ukuba uyayithenga le ncwadi kwaye uzibonele!
Thenga iNcwadi yeShishini eNgcono
tags: incwadi yeshishini elingconoIingcebiso zeshishinidouglas karrPublishingukuzipapashayeka ukumamela wonke umntu